မူးယစ်ဆေးဝါးအသင်းများကိုမငြိမ်းနိုင်အောင်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက် (2017) - Your Brain On Porn
ကိုကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့အသုံးပြုခြင်းနှစ်ကြာမူးယစ်ဆေးအများကြီးလျော့နည်းပျော်စရာရှာတွေ့ဆိုသညျကား, ဒါပေမဲ့သူတို့ကြီးမြတ်အခက်အခဲဖြတ်ရှိသည်။ ဘုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးစွဲကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေအဘယ်ကြောင့်သိနာတောင်ပေါ်မှာဆေးပညာ၏ Icahn သည် School တွင်သုတေသီများကဦးဆောင်အသစ်ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုဒီဒီတော့ဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြသအဖြစ်။
သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်စက်တင်ဘာလ5ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ စွဲဇီဝဗေဒ, နာတာရှည်အသုံးပြုသူများသည်သွေးကြောနှင့် Self- ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့် ventromedial prefrontal cortex (VMPFC) တွင် "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချို့ယွင်း" ရှိသည်, စိတ်ကြွဆေးနှင့် Self- ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အရာဝတ္ထုနှင့်အပြုအမူတန်ဖိုးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားကြောင်းသင်ယူမှုအမျိုးအစားအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကြောင်းတွေ့ရှိ ။
အဆိုပါသိနာတောင်ပေါ်လေ့လာမှုကိုခေါ်သင်ယူမှုတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားစုံစမ်းစစ်ဆေး မျိုးသုဉ်း မူးယစ်ဆေးစွဲနေမှုကိုစွဲလမ်းနေသည့်မူးယစ်ဆေးစွဲနေခြင်းအပေါ်အခြေခံသောနဗ်ကြောဆိုင်ရာဗေဒယန္တရားကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ကြားနေမှုအသစ်ဖြစ်သောအသင်းအဖွဲ့အသစ်သည်ထိရောက်စွာနှိုးဆွသောအသင်းအဟောင်းတစ်ခုကိုအစားထိုးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်။
ဤမေးခွန်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်, သုတေသနအဖွဲ့ကစုဆောင်း အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု ပုံရိပ်မူးယစ်ဆေးအလေ့အထမရှိဘဲနာတာရှည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုသမိုင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သုံးအဆင့်ဂန္ထဝင်အေးစက်ပါရာဒိုင်းအပေါ် (fMRI) ဒေတာ။ သူတို့ကမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ဦး VMPFC-mediated ချို့ယွင်းမူးယစ်ဆေးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောရလဒ်များနှစ်ဦးစလုံး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်, ပေမယ့်မရှိတော့ယခင်ကခဲ့လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ရှိကွောငျးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာမှု၏ ဦး ဆောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ၊ အန်နာကိုနိုဗာက“ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအချက်အလက်များအရကြာရှည်စွာကိုကင်းသုံးစွဲသူများသည်တစ်ချိန်ကအပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုဤ 'နားမလည်ခြင်း' သို့မဟုတ်သင်ယူမှုအသစ်ကဤ ဦး နှောက်ဒေသကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဆိုပါကမည်သည့်အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ သူသည် Icahn ဆေးကျောင်း၌ရှိစဉ်လေ့လာမှုတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုသူသည်နယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှအာရုံကြောသိပ္ပံစင်တာတွင်ပါရဂူဘွဲ့ယူသူဖြစ်သည်။
မျိုးသုဉ်းမကြာခဏ phobias တူသောစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ကုသရန်အသုံးပြုသည်အရာထိတွေ့မှုကုထုံးများအတွက်အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသော။
လေ့လာမှု၏အကြီးတန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသူ Rita Z. Goldstein က Ph.D သည်ဆေးစွဲမှု၌မျိုးသုဉ်းမှုအခြေခံသည့်ကုထုံးအတွက်အားကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်လက်ရှိကုသမှုများ၏ VMPFC အပေါ်မှီခိုအားထားမှုတွင်အားနည်းချက်များရှိနေကြောင်းဖော်ပြသည် သိနာတောင်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများသုတေသနအဖွဲ့အားညွှန်ကြားသည်။
ဒေါက်တာ Goldstein သည်နိုင်ငံတကာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်လူသား၏မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်အခြားထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများအားနည်းသောသိမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလေ့လာရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Konova သည် Dr. Goldstein ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ဤလေ့လာမှုတွင် Dr. Konova နှင့်သုတေသနအဖွဲ့မှလေ့လာခဲ့သောလေ့လာမှု၏ဥပမာတစ်ခုမှာထင်ရှားသော“ Pavlov's dog” စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပြီးခွေးများသည်အစားအစာနှင့်ခေါင်းလောင်းသံကိုအစာကျွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ရန်သင်ယူခဲ့သည်။ ခေါင်းလောင်းသံမြည်သောအခါခွေးများမကြာမီတံတွေးထွေးကြသည်။ အကယ်၍ ခေါင်းလောင်းထိုးသည့်အချိန်၌ခွေးများမှအသံမမြည်ဘဲခွေးများ၏တံတွေးတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည် (သို့) ကုသမှုကိုလိုက်နာစရာမလိုတော့ပါ။
ပျောက်ကွယ်သွားသောလေ့လာမှုကိုကုထုံးဆိုင်ရာကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းတစ်ခု၏နောက်ကွယ်တွင်အသုံးပြုသူသည်သဘာဝပတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့သောစိတ်အေးအေးထားသည့်အတွေးကိုအစားထိုးရန်သင်ယူနိုင်သည်မှာယခင်က ၀ ယ်ခဲ့သည့်သို့မဟုတ်စားသုံးခဲ့ဖူးသည့်၎င်းတို့၏ရပ်ကွက်ဥယျာဉ်တွင်လမ်းလျှောက်သောအခါကိုကင်းဝယ်ယူရန်ဟူသောအတွေးဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး။ ဤအသင်းအဖွဲ့အသစ်များအပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏အလေ့အထကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်” ဟုဒေါက်တာ Konova ကဆိုသည်။
ကြောက်လန့်-based သုဉ်းသင်ယူမှုထိုကဲ့သို့သော phobias နဲ့ post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) ၌ရှိသကဲ့သို့, ယခုကျယ်ပြန့်စိုးရိမ်ပူပန်ဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီ technique ကိုခုနှစ်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးအသစ်ကြားနေသို့မဟုတ်အပြုသဘော, အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းအားဖြင့်, (မဟုတ်တော့မဆိုစစ်မှန်သောအန္တရာယ်နှင့်ဆက်နွယ်သော) ထိုအရာမှကြောက်ရွံ့သောသဘောတုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ငွိမျးသည်အထိသူတို့ကိုကြောက်လန့်သောအရာနှင့်ထိတွေ့နေသည် သူတို့ရဲ့မူလကကြောက်ရွံ့ရိုသေအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အခြေအနေနှင့်အတူ။
ယခင်စမ်းသပ်ချက်ရှည်လျားထိုကဲ့သို့သောကင်း-တစ်တသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်အဖြစ်စိတ်ကြွဆေးကိုအသုံးပြုကြသူစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် VMPFC ချို့ယွင်းအကြံပြုကြပေမယ့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (အာရုံခံ morphological သမာဓိတစ်အမှတ်အသား) ဤလူတစ်ဦးချင်းစီ-ဒီအတွက်ဦးနှောက်ဧရိယာထဲမှာပြောင်းလဲကြောင်းဖြစ်ပါသည်ကိုပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါသည် ဤပြောင်းလဲမှုများ functional ဖြစ်စေသုံးပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့် Non-အသုံးပြုသူများသည်အတွက်မျိုးသုဉ်းသင်ယူမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိပါကဆနျးစစျဖို့ သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ဦးနှောက် Scan ဖတ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကို-18 နာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုသူများနှင့်နှစ်ရက်ကျော်ကိုသင်ယူ၏တူညီသောအသိုင်းအဝိုင်း-ပြီးစီးခဲ့သုံးကျည်ထံမှ 15 ထိန်းချုပ်မှုတစ်ဦးချင်းစီ။ အဆိုပါကင်း-သုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ကိုကင်းသုံးစွဲမှု 17 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှအားတစ်သက်တာသမိုင်းနှင့်နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်အကြောင်းကိုလက်ရှိအသုံးပြုသောကင်းခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူမျှမရပ်တန့်ဖို့ကုသမှုရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။
ပထမနေ့တွင် fMRI စကင်နာတွင်ပါဝင်သူများအားပြောရလျှင်အရောင်စတုရန်း (ကြားနေအချက်ပြ) သည်နောက်မှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှု (ဥပမာ၊ ခွေးပေါက်စ) ၏ရုပ်ပုံကိုပြသပြီး၊ ဤအချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနောက် လိုက်၍ ကွဲပြားသောရောင်စုံစတုရန်းဖြစ်သည်။ - ဆက်စပ်သောရုပ်ပုံ (ဥပမာအက်ကြောင်းပိုက်ကဲ့သို့) နှင့်တတိယပုံသည်နောက်မှအိမ်ထောင်စုတစ်ခု၏ပုံဖြစ်သည်။ Pavlov ၏ခွေးများကဲ့သို့ပင်ထိန်းချုပ်ထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်သီးခြားစတုရန်း (ခွေးပေါက်စ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အိမ်သုံးပစ္စည်းများ) ကိုမြင်သောအခါ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရုပ်ပုံကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတတ်လာသည်။ သူတို့ရဲ့ VMPFC ကလည်းတုန့်ပြန်ပါတယ်။ သူတို့ကပထမအသုတ်ကိုသင်ယူခဲ့တယ်။
ထို့နောက်အုပ်စုများထပ်တလဲလဲရုံတွေကို (ရင်ပြင်) ပြသခဲ့ကြသည်များနှင့်ရှေ့တော်၌ချိတ်ဆက်ခဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုနောက်တဖန်အညီတုံ့ပြန်: VMPFC တုံ့ပြန်မှုယခုခွေးကလေး၏ရုပ်ပုံကိုခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုမှအဖြစ်အမြင့်ဆုံးမ (ကသာယာသောနှိုးဆွ) နှင့်မအက်ကွဲပိုက် (အနေနဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်လှုံ့ဆော်မှု) ခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုမှသကဲ့သို့အနိမ့်။ ဤသည်မျိုးသုဉ်းသင်ယူမှုပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ်သည့်အခါပထမဦးဆုံးသုဉ်းအဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသစ်သင်ယူမှုဘေးဒဏ်သင့်ဓာတ်ပုံများကိုမဟုတ်တော့တွေကိုနောက်တော်သို့လိုက်စွဲချက်တင်ကြောင်းအရပျကိုယူပြီးခံခဲ့ရသည်။
သင်တန်းသားများကိုနေ့ချင်းညချင်းတည်းခို, နက်ဖြန်နံနက်, သူတို့ကထပ်တွေကိုပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမျိုးသုဉ်းတုံ့ပြန်မှုယခင် နေ့မှစ. သုဉ်းအသင်းအဖွဲ့တချို့၏ retention ကိုကြောင့်ဤအချိန် ပို. ပင်သိသာခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်ကင်း-သုံးပြီးအုပ်စု VMPFC အချက်ပြမှုများကိုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု၏တူမပေးခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ဒေတာမျိုးသုဉ်းသင်ယူမှုမျိုးသုဉ်းသင်ယူမှုအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်, တူညီတဲ့ဒီဂရီဖို့ VMPFC ထိတွေ့ဆက်ဆံမပြုခဲ့ကြောင်းထင်ရှားဒေါက်တာ Konova ကပြောပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများတွင်ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုများရှိခဲ့သည့် striatum ကဲ့သို့သော ဦး နှောက်၏အခြားဒေသများကိုလေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ခိုင်မာပြီးကောင်းမွန်သောမူးယစ်အသင်းအဖွဲ့များကိုအသစ်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ "သို့မဟုတ်သိမြင်မှုပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးဝါးဗေဒမှတဆင့် VMPFC function ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နည်းလမ်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များအတွက်မျိုးသုဉ်းခြင်းလေ့လာခြင်းသည်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်သည့်အခါချစ်စရာခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရန်မျှော်လင့်ခြင်း - သို့မဟုတ် ဆေး-related ရလဒ်များ-ထားချက်အရဒီလည်းဖြစ်နိုင်ဖွယ်-သုံးပြီးဝေဖန်ဦးနှောက်ဧရိယာသက်တမ်းကြာကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမရှိတော့အခါတစ်ဦးအက်ကွဲပိုက်ကိုမြင်လျှင် ကိုကင်းအသုံးပြုသူများသည် ထွက်သည်။"
ဒေါက်တာဂတ်စတိန်းက“ ဒီအရာကစွဲလမ်းမှုအတွက်အာရုံကြောသိပ္ပံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုတကယ်ပဲမီးမောင်းထိုးပြထားတာပါ။ ဒီလေ့လာမှုနဲ့တခြားသူတွေကလက်ရှိချဉ်းကပ်မှုတွေဘာကြောင့်ပျက်ကွက်တာလဲ၊ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ပိုပြီးထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းသစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိတာကိုပြောတာကအထောက်အကူပြုတာပဲ။